တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: ၁၃ - စနေ
Posted by မေဓာဝီ at 4:18 PM
ဒီနေ့အဲ့ဒီ သီတင်းကိုကြားလိုက်ရတာ စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်။ အစ်မပြောထားတဲ့ သုဉ်းတွေကို တွင်တွင်သုံးထားတဲ့ ဒီကဗျာလေးလိုပါပဲ။ သုညခေတ်ကြီးဆိုတာလည်း အမှန်ပါပဲ။
တကယ်ကတော့ ကံကောင်းခြင်း၊ ကံဆိုးခြင်းဆိုတာက လူနဲ့လဲ အတန်အသင့်တော့ သက်ဆိုင်ပါတယ်။ ဟိုသတင်းကတော့ တကယ်ကို စိတ်မကောင်းစရာပါပဲ၊ ဒီလိုဖြစ်လာမယ်လို့ ထင်ထားခဲ့ပေမယ့် တကယ်ကိုဖြစ်လာတော့ ကျနော်လဲ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်။ ဆက်မသုဉ်းတော့တဲ့ ကံကောင်းခြင်းဆက်သုံးနေ့တွေကို ရောက်ပါစေတော့လို့ ဆုတောင်းရင်း....။
ြUnfortunately, even this didn't hold true for the poet, the See-bann-ne Sayadaw, whose tomb in Mandalay was desecrated and moved by the junta.
I do not believe it the day 13 is trouble for everything (it's b4) because if urs take action is good reaction also shallbgood that is my believe it. But now i confuse about that day 13 because of someone gave me trouble and hurt. of course..........
အန် စိတ်မကောင်းစရာ သတင်းဆိုတာ ဘာလဲဟင်။ ခွန်လည်း မသိလိုက်ရပါလား။ ပြောပြပါအုံးလားနော်။ ခွန်လည်း သိချင်တယ်။
ဆယ့်သုံးဂဏန်းမကောင်းဘူးဆိုတာက ဘယ်လို အတိတ်နိမိတ်ကို ကြည့်ပြီး ဟောကြတာလဲ။ ခွန်ကတော့ သိပ်အစွဲအလမ်း မရှိဘူး
ဆက်သုဉ်း ဆက်သုဉ်း ..
သုဉ်းနေတဲ့ခတ်ကြီးမြန်မြန်သုဉ်းပါစေလို့ ကျနော်ဆုတောင်းပါတယ်။ သုဉ်းပြီးရင်း သုဉ်းရင်းနဲ့ သုဉ်းလို့မပြီးနိုင်လို့ပါ။
1/17/2007 3:16 PM
သုံးသုံးဝဆိုတဲ့ ကဗျာလေး အရမ်းကြိုက်တယ်